Jeremaya 6 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
6 Gbaanụ ọsọ ndụ, unu ụmụ Benjamin, sinụ n’ime Jeruselem gbapụ; fụọkwanụ opi+ na Tekoa.+ Mụnyenụ ọkụ na Bet-hakirem+ ka ọ bụrụ ihe mgbaàmà; n’ihi na ọdachi, ee, oké mbibi, na-eru ka mmiri n’ebe ugwu.+ 2 Ada bụ́ Zayọn yiri nwaanyị mara mma nke a zụtọrọ azụtọ.+ 3 Ndị ọzụzụ atụrụ na ìgwè atụrụ ha bịakwutere ya. Ha mara ụlọikwuu ha gburugburu ya.+ Atụrụ nke onye ọ bụla n’ime ha tachapụrụ ahịhịa dị n’ebe ọ nọ.+ 4 Ha ejikerewo ibuso ya agha* wee sị:+ “Bilienụ ka anyị gawa n’etiti ehihie!”+ “Anyị efuola, n’ihi na chi ejiwela, n’ihi na onyinyo mgbede na-adịwanye ogologo!” 5 “Bilienụ ka anyị gaa n’abalị wee laa ụlọ elu ya niile n’iyi.”+ 6 N’ihi na nke a bụ ihe Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru: “Gbutuonụ osisi,+ maakwanụ ékpè iji buso Jeruselem agha.+ Ọ bụ obodo nke a ga-eme ka ọ zaa ajụjụ.+ Naanị ihe dị n’ime ya bụ mmegbu.+ 7 Dị ka olulu mmiri si echekwa mmiri nke dị n’ime ya, otú ahụ ka o si chekwaa ihe ọjọọ ya. A na-anụ mkpọtụ ime ihe ike na ibukọrọ ihe ndị mmadụ n’ime ya;+ ọrịa na ihe otiti dị n’ihu m mgbe niile. 8 Jeruselem, nara ịdọ aka ná ntị,+ ka mkpụrụ obi m ghara ịgbakụta gị azụ;+ ka m ghara ime ka ị ghọọ ebe tọgbọrọ n’efu, ghọọkwa ala mmadụ na-ebighị.”+ 9 Nke a bụ ihe Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru: “Ha aghaghị ịtụtụkọrọ ndị Izrel fọdụrụ dị ka mkpụrụ vaịn.+ Matịa aka ọzọ dị ka onye na-aghọ mkpụrụ vaịn n’alaka osisi vaịn.” 10 “Ole ndị ka m ga-agwa okwu, dọọkwa aka ná ntị, ka ha wee nụ? Lee! Ntị ha bụ ntị a na-ebighị úgwù, ọ bụ ya mere ha enweghị ike ịṅa ntị.+ Lee! Ha na-akọcha okwu Jehova,+ nke bụ́ okwu na-adịghị atọ ha ụtọ.+ 11 Ọnụma juru m obi dị ka o juru Jehova. Ike agwụwo m idi ya.”+ “Wụkwasị ya nwatakịrị nke nọ n’okporo ámá+ na ìgwè ụmụ okorobịa ndị bụ́ ezigbo enyi n’otu mgbe ahụ; n’ihi na a ga-ejide ha, nwoke na nwunye ya, agadi nwoke na onye nọworo ndụ ruo ọtụtụ afọ.+ 12 A ga-enyefe ndị ọzọ ụlọ ha ka ha biri, ubi ha na ndị nwunye ha ga-abụkwa nke ndị ọzọ n’otu mgbe.+ N’ihi na m ga-amatị aka mee ndị bi n’ala a ihe,” ka Jehova kwuru.+ 13 “N’ihi na onye ọ bụla n’ime ha na-enwetara onwe ya uru na-ezighị ezi, malite n’onye kasị nta ruo n’onye kasị ukwuu;+ onye ọ bụla na-aghọ aghụghọ, malite n’onye amụma ruo n’onye nchụàjà.+ 14 Ha na-agbalị ịgwọ ọkpụkpụ ndị m nke gbajiri agbaji, ma ha ejighị ya kpọrọ ihe,+ na-asị, ‘Udo dị! Udo dị!’ mgbe udo na-adịghị.+ 15 Ihere ò mere ha na ọ bụ ihe arụ ka ha mere?+ Nke mbụ bụ na ihere adịghị eme ha ma ọlị. Nke abụọ bụ na ha amadịghị ihe bụ́ ihere ime mmadụ.+ N’ihi ya, ha ga-eso ndị ga-ada ada daa;+ mgbe m ga-eme ka ha zaa ajụjụ, ha ga-asụ ngọngọ,” ka Jehova kwuru. 16 Nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Guzoronụ n’ụzọ hụrụ, jụọnụ ajụjụ okporo ụzọ ndị dịwara kemgbe oge ochie, bụ́ ebe ezi ụzọ dị ugbu a;+ jeekwanụ ije na ya+ ka ahụ́ ruo mkpụrụ obi unu ala.”+ Ma ha nọ na-asị: “Anyị agaghị eje ije na ya.”+ 17 “M wee nye unu ndị nche,+ sị, ‘Ṅaanụ ntị n’ụda opi!’”+ Ma ha nọ na-asị: “Anyị agaghị aṅa ntị.”+ 18 “Ya mere, nụrụnụ, unu mba dị iche iche! Marakwanụ ihe ga-eme n’etiti ha, unu ndị zukọrọ ọnụ. 19 Gee ntị, gị ụwa! Lee, m na-eme ka ọdachi dakwasị ndị a,+ dị ka ihe echiche ha rụpụtara,+ n’ihi na ha aṅaghị ntị n’okwu m; ha nọkwa na-ajụ iwu m.”+ 20 “Olee nke gbasara m na unu na-eweta ọbụna frankinsens nke si Shiba,+ na-ewetakwa ahịhịa na-esi ísì ụtọ nke si n’ala dị anya? Àjà unu nke a na-esurecha n’ọkụ adịghị enye m obi ụtọ,+ àjà nkịtị unu na-achụ adịghịkwa atọ m ụtọ.”+ 21 Ya mere, nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Lee, m na-edebere ndị a ihe ga-eme ka ha sụọ ngọngọ,+ ọ ga-emekwa ka ha sụọ ngọngọ, ma ndị bụ́ nna ma ụmụ ha; mmadụ na onye agbata obi ya ga-ala n’iyi.”+ 22 Nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Lee! E nwere ndị si n’ala dị n’ebe ugwu na-abịa, e nwere nnukwu mba nke a ga-esi n’ime ime ụwa kpọtee.+ 23 Ha ga-eji ụta na árọ̀.+ Obi tara mba ahụ mmiri, ha agaghị enwe ọmịiko. Olu ha ga-ebigbọ dị ka oké osimiri,+ ha ga-agbara ịnyịnya bịa.+ Ọ haziwo onwe ya n’usoro ibu agha dị ka onye agha ka o wee buso gị agha, gị ada bụ́ Zayọn.”+ 24 Anyị anụwo akụkọ banyere ya. Aka akụdawo anyị.+ Anyị nọ n’ahụhụ. Ihe mgbu nke anyị nọ na ya dị ka nke nwaanyị na-amụ nwa.+ 25 Abanyela n’ọhịa, agakwala ọbụna n’ụzọ; n’ihi na onye iro ji mma agha, ụjọ dịkwa ebe niile.+ 26 Ada bụ́ ndị m, kee ákwà iru uju n’úkwù,+ tụrụọkwa onwe gị ná ntụ.+ Ruo uju dị ka nke a na-eruru nwa a mụrụ naanị ya ma ọ nwụọ, bụ́ mkpu arịrị e ji obi ilu na-eti;+ n’ihi na onye na-ebukọrọ ihe mmadụ ga-abịakwasị anyị na mberede.+ 27 “Emewo m ka ị bụrụ onye na-anwale ọla n’etiti ndị m, onye na-enyocha ihe nke ọma; ị ga-amata ụzọ ha ma nyochaa ya.+ 28 Ha niile bụ ndị isi ike karịa mmadụ niile,+ ha na-agagharị dị ka ndị nkwutọ,+ ha dị ka ọla kọpa na ígwè. Ha niile bụ ndị na-ebibi ihe.+ 29 Ékò+ agbawo ọkụ. Ọ bụ opu ka ha nwetara n’ọkụ ha.+ Onye na-anụcha ọla anọwo na-anụchasi ọla ike n’efu, e wepụghị ndị ọjọọ.+ 30 Ndị mmadụ ga na-akpọ ha ọlaọcha a jụrụ ajụ,+ n’ihi na Jehova ajụwo ha.”+
^ Ya bụ, “ha edowo agha nsọ.”